Snr Fast sezinwele Forex Ukuhweba Isu - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Amasu we-Forex Scalping Snr Fast sezinwele Forex Ukuhweba Isu
Snr Fast sezinwele Forex Ukuhweba Isu
Februwari 22, 2020
1 Snr Fast sezinwele Forex Ukuhweba Isu
1.1 Ukusekelwa kanye Nokumelana eshadini elinemizuzu engu-1
1.2.1 Thenga ukusethwa kwezohwebo
1.2.2 Thengisa ukusethwa kwezohwebo
1.3.3 Ungayifaka kanjani i-SNR Fast Scalp Forex Ukuhweba Isu?
I-Scalping idume ngokuba ngenye yezindlela ezinzima kakhulu zokuhweba emakethe. Abathengisi abaningi abazama ukufaka izinyawo zabo ekushayeleni bagcina belahlekelwe yimali. Ngokwesinye isandla, abaningi baphinde benza imali enkulu ngokukhipha izikali.
Yize ukuskena kunzima kakhulu ukuhweba, kepha kungenzeka ukuthi akubangelwa ngokuphelele uhlobo lwezikhathi eziphansi uqobo. Impela, kunomsindo omncane kakhulu ngesikhathi sesikhathi semizuzu engu-1 futhi ukusetha kususelwa kalula ngabathuthi abakhulu bemakethe, kepha lezo zinto ziyingxenye yesizathu esenza ukuthi abathengisi balahlekelwe yimali.
Isizathu sokuqala esenza abathengisi balahlekelwe yimali beqa izimakethe kungenxa yokuntuleka kokuhlaziywa. Ngenxa yejubane elikhulu le-scalping kanye nesikhathi esinqunyelwe abahwebi kufanele benze isinqumo, abathengisi bavame ukweqa behlaziya imakethe bese begcina ukwenza izinqumo ezixakile. Ukhiye ukuthi ube namathuluzi wokukusiza uhlaziye imakethe ngaphandle kokuthatha isikhathi esiningi.
Ukusekelwa kanye Nokumelana eshadini elinemizuzu engu-1
Ukuxhaswa nokuphikiswa kuyindlela enamandla namathuluzi okuhlaziya imakethe. Lezi yizindawo noma amaphoyinti entengo eshadini lapho intengo ingagxuma khona noma iqhume. Noma kunjalo, ngasizathu simbe asisetshenziswa kakhulu eshadini lemizuzu engu-1. Mhlawumbe ucabanga ukuthi lezi zinto ezisekelwayo kanye nokumelana nazo azisebenzi ezikhathini eziphansi ngenxa yomsindo, kodwa uzomangala ukuthi zisebenza kanjani uma zifakwe isu lakho lokuhweba.
Kuleliqhinga lokuhweba sizobe sisebenzisa enye yezindlela eziyisisekelo zokudweba izixhasi nokumelana - kusetshenziswa izindlamlenze eziguqukayo nezindawo eziphakeme ukudweba izixhaso ezilinganayo.
Ngoba ukushibilika kwama-swing and highs kuyizindawo zokuguqula ezedlule eshadini lentengo, imakethe izobe ibheka lezo zindawo. Ithuba lelo, ngokungafani nokuxhaswa kwe-diagonal nokumelana, ukwesekwa okuvundlile nokumelana kuyizibalo zentengo eziqondile, ngakho abathengisi kungenzeka ukuthi babeke ama-oda alindile kulezo zindawo.
Ngoba sithengisa isikhathi esiyimizuzu engu-1, imakethe izoba nemikhuba yokweqa ukusekelwa nokuphikisana, okungadala ukuhlukana. Isu lethu lokuhweba sizobe sidayisa ukuqhekeza okwenzeka njengoba kwenzeka futhi sethemba ukuthi umfutho kanye nokulinda ama-oda kuzobangela amanani entengo engaphezulu kokusekelwa kanye nokumelana okuvela emaphepheni ambalwa esivuna.
Futhi, ngoba ukuhlaziya imakethe nokudweba kusekela nokuncikeka ngesikhathi sezinsuku ezi-1 kungashesha kakhulu, sizosebenzisa inkomba edonsela ngokuzenzakalelayo ukusekela nokuvundla okuqondile.
Ubude besikhathi: 1-ishadi minute
lwemali Pair: GBPUSD & I-EURUSD
Session: Iseshini yaseLondon naseNew York
Ukumelana okuvundlile kwakamuva kakhulu kufanele kudonswe yinkomba eshadini
Setha okulindile kwe-Buy Stop Order ekumeni ovundlile
Setha ukulahleka kokumisa ku- 5 Pips ngenhla intengo entry
Setha inzuzo at 5 Pips ngezansi intengo entry
Ukusekelwa okuvundlile kwakamuva kakhulu kufanele kudonswe yinkomba eshadini
Setha okulindile kwe-Thengisa Stop Order ekusekelweni okuvundlile
Setha ukulahleka kokumisa ku- 5 Pips ngezansi intengo entry
Setha inzuzo at 5 Pips ngenhla intengo entry
Leli su lisivumela ukuthi sibambe imisebenzi emincane yesikhashana eyenzeka ngenxa yokuqhekeka. Ngenxa yalokho, singacabanga ukuthi intengo izohamba ngokuqondisa ezinye izinkomba eziningi. Kungenzeka ube nokuqhekeka okuqinile okuzuzayo futhi uzuze 10, 15, ngisho 20 pips ngaphezulu kwezohwebo olulodwa, kepha lokhu akuyona njalo njalo. Icala elivame kakhulu liveza ukuthi intengo ingaqhuma ngekhandlela elinamandla cishe 5 - 10 amapipi. Leli ibanga ongadlala nalo, kepha kube ngukulondeka, sizobe sihlose kuphela 5 amapipi.
Kukhona futhi izimo lapho ngemuva kwekhandlela lokuqhekeza, intengo ibizohlala itholakale emaphayipini amaningana ngaphambi kokuya endaweni yethu. Lokhu kwaziwa kakhulu phakathi kwabahwebi bezentengo njengento yokubuya. Ukulungiselela lezi zehlakalo, sizobe sisebenzisa ukulahleka kokumisa okungamapayipi angama-5. Ngaleyondlela, singaba negumbi elinolaka ngentengo ongahamba nalo.
Leli qhinga luhlobo lwecebo lesilinganiso sokulungiswa komngcele, nge 1:1 isilinganiso. Lesi akusona isilinganiso esihle sengozi somvuzo, kodwa lokhu kuyenzeka inqobo nje uma sinesilinganiso esihle sokulahlekelwa. Ukwenzela isilinganiso esiphansi somngcipheko, lecebo livumela imvamisa ephezulu yokusebenza. Lokhu kungavumela izilinganiso eziphansi nezinamba ezinkulu ukuthi zidlale ingxenye yazo.
I-SNR Fast Scalp Forex Ukuhweba Isu yinhlanganisela yeMetatrader 4 (MT4) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
I-SNR Fast Scalp Forex Ukuhweba Isu linikeza ithuba lokuthola ubuntu obuhlukahlukene namaphethini kumandla entengo angabonakali ngamehlo anqunu.
Ungayifaka kanjani i-SNR Fast Scalp Forex Ukuhweba Isu?
Landa i-SNR Fast Scalp Forex Ukuhweba Strategy.zip
Hambisa kwesokudla ukukhetha isu le-SNR Fast Scalp Forex Ukuhweba
Uzobona i-SNR Fast Scalp Forex Ukuhweba Isu Kuyatholakala Eshadini lakho
Isiqephu esedluleToptahlil Bounce Forex Swing Forex Ukuhweba Isu
Isihloko esilandelayoTrend Slope Forex Ukuhweba Isu
Septhemba 25, 2021
Linear Regression Channel Breakout Forex Ukuhweba Isu
Septhemba 24, 2021
Setha Amazinga Wombala we-Fibo MT5 Indicator
Izinkomba ze-Forex MT54286
Izinkomba ze-Forex MT42325
Amakomidi e-Forex - Septhemba 25, 2021 0